China အဆောက်အဦး Lighting China Manufacturers & Suppliers & Factory
အဆောက်အဦး Lighting - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 22 များအတွက်စုစုပေါင်း အဆောက်အဦး Lighting ထုတ်ကုန်များ)
double-တဖက်သတ်နဲ့ LED Guardrail အလင်း
အဆိုပါ LED အလင်းရင်းမြစ်ပေါ် guardrail အလင်းအတားအဆီးအလင်းအိမ် LED, အနီရောင်အဝါရောင်, အစိမ်းရောင်, အပြာရောင်, အဖြူ, ခရမ်းရောင်, အစိမ်းသို့မဟုတ်ရောင်စုံအရောင် gradient ကို, ခုန်, အရောင်တောက်ပ Random, ပြောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့်, ထိုကဲ့သို့သော microchip ထိန်းချုပ်မှုတို့ကအဖြစ်, ရှိပါတယ် gradient ကို, Chase,...
အလူမီနီရှဲလ်နဲ့ LED အမှတ်တရအဝတ်လျှော်မီးအိမ်
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်လက်ဆေးမြို့ရိုးကိုဆီမီးခွက် LED, ရေကဲ့သို့အလင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်းကြီးမားသောအဆောက်အဦကိုဖျောပွဖို့အသုံးပြုအတှကျအသုံးပွု, တန်တိုင်းရိုးကိုလျှော်ကြကုန်အံ့။ LED ကိုစွမ်းအင်ချွေတာမြင့်မားတောက်ပထိရောက်မှု,...
LED Tile slot မီးအိမ်လေ့ရှေးခေတ်ဗိသုကာအလင်းရောင်, တလငျးနှငျ့တစျခုအလငျး၌အသုံးပြုသည်နှင့်အခြားဘက်ခြမ်းအလင်းသတ္တုများပုံသွန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် luminaires တစ်တောက်ပဒိုင်းလွှားကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး, အဆောက်အအုံ Lighting, အဆောက်အအုံ Lighting ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ, အဆောက်အအုံ...
အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး, အဆောက်အအုံ Lighting, အဆောက်အအုံ Lighting ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ, အဆောက်အအုံ Lighting ဒီဇိုင်း, ဦးဆောင်ရှင်းလင်းခြင်းအလင်း, ဦးဆောင်ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းများ, ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းမီးသီးဦးဆောင်ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းဘားဦးဆောင်ပြီး။ LED ရှင်းလင်းရေးဆီမီးခွက်အားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုခုခံရှိပြီး...
စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကကြှနျုပျ၏ကုမ်ပဏီ3နှစ်, ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက် ပို. ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့် LED အချက်အလင်းနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုအမှတ်တံဆိပ်မီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မြို့အဆောက်အဦအလင်းရောင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ကိုဖန်တီးရန်ကျူးလွန်နေကြတယ်, ရောင်စုံ LED မီးပွိုင့်အလင်းအရင်းအမြစ်ကျော်ကို 10 နှစ်ကြာခဲ့ , monochromatic LED...
လက်ရှိတွင်တရုတ်အများအပြားအများပြည်သူသောအရပ်တို့ကိုညဥ့်အမြင်အလင်းရောင် function ကိုအတူအလင်းရောင် guardrail တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဒါဟာအများဆုံးလမ်းများ, ပန်းခြံများနှင့်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုအဘို့သင့်လျော်သည်။ ၏သင်တန်း, ဒီဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပြီး, နောက်ဆုံးတော့အလင်းအိမ်နှင့်...
အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းအဖြစ်လမ်းဆီမီးခွက်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန် LED ကြောင့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးရိုးရာလမ်းအလင်းရောင်ထက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော, တောက်ပထိရောက်မှုရှည်လျားသောဘဝမြင့်မားဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျ, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်...
အဆောက်အဦး Lighting အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး အသိဉာဏ်စီးတီး Lighting အဆောက်အဦး Lighting ဒီဇိုင်း ညမှာလမ်းမ Lighting စမတ်စီးတီး Lighting Led ပြောက်အလင်း 14 မီတာလမ်းမီး
အဆောက်အဦး Lighting အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး အသိဉာဏ်စီးတီး Lighting အဆောက်အဦး Lighting ဒီဇိုင်း ညမှာလမ်းမ Lighting